I-EU ibongoze ukuba iyeke ukwaphulwa kwamalungelo abasebenzi baseAlitalia
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-EU ibongoze ukuba iyeke ukwaphulwa kwamalungelo abasebenzi baseAlitalia
Airlines • isikhululo • Iindaba zeManyano • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zase-Itali eziQhekezayo • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
I-ETF iyigxeka kabukhali into yokuba iKhomishini yaseYurophu isilele ukunika naliphi na ilungelo kumalungelo abasebenzi phantsi kweNtsika yaseYurophu yamaLungelo oLuntu.
I-ITA inikwe ukukhanya okuluhlaza ukuze ithathe inxaxheba kwimisebenzi yeAlitalia.
Isigqibo eso kukwaphula umthetho ngokubanzi kwamalungiselelo eengxoxo ezihlanganisiweyo, utshilo umanyano.
Isigqibo seKhomishini sichaphazela ngokuthe ngqo ubomi babantu abangaphezu kwe-11,000.
Umbutho wabasebenzi bezothutho waseYurophu uzigxeka kabukhali izigqibo ezibhengezwe namhlanje yiKhomishini yaseYurophu ngokubhekisele kwityala leAlitalia / Italia Trasporto Aereo SpA (ITA) elinika ukukhanya okuluhlaza kwinkampani entsha, i-ITA, ukuba ithathe inxaxheba kwimisebenzi yeAlitalia.
Sothuswe kukuba iKhomishini yaseYurophu inokuthi ngokulula kwaye ngaphandle kokuqwalaselwa kwamalungelo abasebenzi ithathe eso sigqibo. Ngokoluvo lwethu, esi sisibetho esinzima kunye nokwaphula umthetho kwamalungiselelo eengxoxo ezisemthethweni ezikhoyo e-Itali, kuqhuma iinzame zemibutho yabasebenzi base-Itali kunye nabaqeshi ekuthethathethaneni ngezivumelwano ezitsha zokusebenza. Endaweni yoko, imeko ye-EC namhlanje ikhuthaza iikhontrakthi zabasebenzi ezintsha nezinokuba yingozi. IKhomishini le iqhutywa ngokucacileyo ukuba yongathe iindleko kwaye iyakwenza oko ngokuchasene nokuhamba ngenqwelomoya ngokuzinzileyo, ngakumbi inqwelo moya.
ULivia Spera, uNobhala Jikelele we-ETF uxela:
Le yimpama ebusweni kubasebenzi baka-Alitalia, kwiintsapho zabo nakwiimanyano zabo. Isigqibo seKhomishini sichaphazela ngqo ubomi babantu abangaphezu kwe-11,000 kunye neentsapho zabo kwaye ukusebenzisa intetho enjalo kuyacaphukisa kwaye kuyazigxeka iingxaki zabo. Ngokubambisana nabalingane bethu ababebonakalisa ngokuchaseneyo nale ndlela ingalunganga nengazinzisiyo, ndibiza iKhomishini yaseYurophu ukuba irhoxise ingxelo yayo kwaye iphinde iqwalasele iinjongo zalo mvume yoncedo lukarhulumente, engalixhasiyo ishishini lokuhamba ngenqwelomoya elizinzileyo, kwaye elingayixhasiyo Abemi baseYurophu.
Ukongeza, i-ETF iyigxeka kabukhali inyani yokuba iKhomishini yaseYurophu isilele ukunika ingqwalaselo kumalungelo omthetho wabasebenzi phantsi kweNtsika yaseYurophu yamaLungelo oLuntu, kubandakanya kodwa kungaphelelwanga kwimigaqo yokhuseleko lwengqesho ekhuselekileyo nolungeleleneyo kunye nengxoxo yasentlalweni. Ngapha koko, i-ETF itsalela ingqalelo kwinto yokuba i-EC iyazihoya naziphi na iinzame zokukhusela izivumelwano zabasebenzi eziza kuqeshwa ngumphathi omtsha, i-ITA.
I-ETF ixhasa ngokupheleleyo abasebenzi baseAlitalia baseTaliyane abagwayimbayo namhlanje, kwiinzame zabo zokuvula iingxoxo kunye nomqeshi omtsha, i-ITA. Oku kufuneka kwenziwe ngentlonipho epheleleyo kumthetho wase-Itali, kunye nokuqonda ilungelo lokuxoxisana ngokudibeneyo kwinqanaba likazwelonke.